संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तर पूर्वी राज्य भर्जिनियाको पुरानो र सुन्दर शहर 'फल्सचर्च'। रातको करीब दश बजेको समय। ली हाइवेमा मोटरगाडीहरु बिस्तारै पातलिदै थिए।आकाश हल्का कालोनिलो भएर आयो,सायद राती पानी पार्ने बाताबरण बनाउदै थियो प्रकृति।
आफिसको काम सक़ेर म अन्य दिन भन्दा अलि ढिला आफ्नै गाड़ीमा घर फर्कदै थिए,गाडीमा बाहिरको मौसमसंग मिल्दोजुल्दो एउटा अंग्रेजी गित गुंजिरहेको थियो। म त्यों सुनसान सड़कमा संगीतको तालमा हराईरहको थिए। मलाई सड़कमा आफु एक्लै मात्र दौड़ीरहेको आभास भैरहेथ्यो । हिडेको करीब ५ मिनेट पछि मेरो गाड़ीले मेरीफील्ड गार्डेन क्रस गर्यो। दिनभरको कामले म केहि थकित थिए। पानीको चुस्की लगाउँदै म स्टेरिंग घुमाउदै थिए।अकस्मात्, सड़कको दाहिने पेटीबाट एक कालो बर्णकी अर्धबैशे महिलाले हात हल्लाउदै गाडी रोक्न आग्रह गरिरहे झै लाग्यो। म रोक्ने/नरोक्ने दोधारमा थिए।गाड़ीको गति बिस्तारै घटाउँदै उस्कै छेउमा लगेर रोके। ऊनी गाडी नजिकै आएर झ्यालमा ढकढकाउन थालिन।
'एक्सक्यूज मी,क्यान यू प्लीज गिभ मी अ राइड टू सेफवे ?' ऊनि बिनम्र भएर म संग प्रश्न गर्दै थिइन।
रातको समय एक अपरिचित महिलाले मसंग सहयोग माग्दै गर्दा मेरो मानसपटललाई के गर्ने के नगर्ने निर्णय गर्न निक्कै गारो भयो। मैले झट्ट 'यस' या 'नो' दुबै भन्न सकिन।
"हे डीड यु हिअर मि ?" उन्ले जवाफ माग्दै थिइन ।
म अकमकाए झै भए "म्याम! ओके व्हेरआर यु गोइंग?" मेरो मुख बल्ल खुल्यो।
"आईएम नान्सी,आई मिस्ड लास्ट बस फर बलस्टन मल" उनले आफ्नो बेली बिस्तार सुनाइन।मलाई दया पलाएर आयो। गाड़ीको झ्याल खोल्दै मैले राइड दिने सहमति जनाएर भने "ओके"।
हातमा रातो हैण्डब्याग बोकेकी ऊनि मुस्कुराउदै मेरो गाड़ी भित्र छिरिन्।
उनको शरीरबाट निस्केको अत्तरको गाढ़ा बास्ना मेरो कार भरी फैलियो।सिटमा बसेपछि मैले उन्लाई सिट बेल्ट बाध्न आग्रह गरे। मलाई एकटकले हेर्दै ऊनि मुस्कुराईन। मेरो गाडी अघि बढ्यो। सड़क शान्त थियो। ४९५ बेल्टवेमा रफ़्तारमा गुडेका गाडीको आवाज प्रस्टै सुनिन्थ्यो।ऊनि मसँग बोल्ने केही बहाना खोज्दै थिइन सायद,सिटको पछाडिको भागमा टाउको बिसाएर लामो स्वास तान्दै भनीन 'व्हेर डू यु लिभ ?'
मैले आफु यही फल्सचर्च सहरमा बस्ने जवाफ दिए।
'आर यु सिंगल ?' सायद कुनै अपरिचित स्त्रीले सोधेको पहिलो प्रश्न थियो मलाई।
'होइन, म बिबाहित हु, मेरो दुई बर्षको छोरो पनी छ ',मेरो जवाफ सुनेर उनी केही समय चुप लागिन। त्यों समय सम्म गाडीले जेफ़र्सन पार्क क्रस गरिसकेको थियो।
'आर यु ह्याविंग अ ह्यप्पी लाइफ ? ऊनि मलाई खोतल्दै थिईन।
खुसी छु जीवन देखि किनकि आफैले रोजेको मान्छे जो मैले पाएको छु हरेक सुख दुःखको साथी। मैले गाडीको गति केही बढाए।अब त उस्को ओर्लने ठाउ पनि नजिक आइसकेको थियो।
'यु सेड सेफवे राइट ? मैले उस्को गन्तब्य नजिकै पुग्नै लागेको जानकारी दिए। उस्को मुन्टो मात्र हल्लियो।
सेफवेको पार्किंगमा लगेर मैले गाडी रोके। ऊतिर फर्केर हेर्न खोजे। मलाई टाउको पछाडि कुनै कडा बस्तुले घोचे जस्तै लाग्यो। मैले हात पछाडि बढाएर त्यो कडा बस्तुलाई समात्ने कोशिस गरे। तब म छांगाबाट खसे जस्तै भए। उसको हातमा रहेको कालो रंगको ह्याण्डगन मेरो टाउकोमा तेर्सीरहेको थियो।
'गिभ मी योर् वालेट' उस्को बोली अली कडा भयो। मलाई प्रतिक्रिया जनाउनु उचित लागेन।
'ओके ... ओके' केही आत्तिँदै अनि लरबरिदै यत्ति बोल्न भ्याए। 'हेल्प हेल्प ' भनेर चिच्याउन मन लाग्यो। तर त्यों एकान्त पार्किंग लटमा मेरो गाडी बाहेक कुनै गाडी थिएन। मेरो जीवनको सूर्य क्षितिजमा अस्ताउदै गरे झै लाग्यो।
मैले दुई हात जोडेर उसँग जीवनको भीख मागिरहेको थिए। डरले गर्दा मैले पाइंटको खल्तीमा रहेको फोन झिक्ने आट गर्न पनि सकिन। मेरो हात कापिरहेको थियो। पाइंटको पछाडीको खल्तीबांट आफ्नो वालेट झिकेर उस्को हातमा राखिदिए।मेरो वालेट भित्र घर पठाउनको लागि एटिएमबाट झिकेका बीस/बीसका नोटहरु जम्माजम्मी ५०० डलर थियो,अनि मेरो परिचय पत्र र केही कार्डहरु पनि थिए। उस्ले पैसा मात्र झिकेर वालेट म तीरै हुईकाईदिई।
'डोन्ट ड्राइभ योर कार अंटिल फाइभ मिनेट ओके ' भन्दै उ गाडीको ढोका खोलेर बाहिर निस्किई। उ छिटो-छिटो ली हाईवे क्रस गरेर बाटो पारी उभिई। एउटा कालो भ्यान उसको अगाडि आएर रोकियो । मैले त्यस भ्यानको चालकलाई अँध्यारोको कारण देख्न सकिन। त्यों भ्यान त्यहाँबाट कुलेलाम ठोक्यो।
मैले लामो सुस्केरा हाले। दुई हातले दुबै आँखा मिचे। मेरो गाडीमा उस्को अत्तर अझै बसाइ रहेको थियो।मैले गाड़ीको दुबै झ्यालको सीसा खोले। बाहिरबाट चिसो हावा सरर गाड़ी भित्र छिर्यो। मैले एक पटक बाहिर चारैतिर नजर डुलाए। आफु ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको आभास गरे। आफ्नी श्रीमती र सानो छोरोलाई सम्झिए। मेरो गाडी सेफवेबाट कत्ति चाँडो घर पुग्यो मलाई होसै भएन। गाडीबाट हतार हतार बाहिर निस्केर घर तर्फ अघि बढे। घरको पेटीबाट एउटा बिरालो मलाई हेर्दै फूलहरुको पोथ्रा तीर छिर्यो। मेरो मन अझै डरले कापिरहेको थियो। घरको ढोका ढक्ढकाए। धेरै बेर लगाएर श्रीमतीले ढोका खोलिन।
'आज किन ढीला गर्स्यो नि ,म त टिभीमा लोकल न्यूज़ हेर्दै बसेको थिए, यो न्यूजले त मेरो मनै आत्तियो भन्या' श्रीमती बोल्दै गइन। मैले जुत्ताको तुना खुस्काउदै भने 'हेर न आज एउटा साथीलाइ राइड दिनु पर्यो त्यसैले ढिलो भयो। '
ऊनि मलाई हेर्दै भन्न थालिन 'राति हिडडुल गर्नु एकदम रिस्की छ हजुर, म त्यै न्यूज हेर्दै थिए,आज दिउसो यही अलेक्जेंड्रिया मैं एउटी आइमाईले लिफ्ट मागेर कारवालाको सबै लुटिछे , त्यों हेरेर मेरो डर झन बढेर आयो, हजुर पनि हिड्दा धेरै होसियार भैस्यो है, नचिनेको मान्छेलाई कहिल्यै लिफ्ट नदिसेला।'
मैले पाइंटको मोबाइल छामे अनि उनको बोलीमा सहमत हुँदै टाउको हल्लाए र भने 'हो नि ,अनि छोरो खोई त ?'
उनको जवाफ आयो 'बाबु त अघि नै सुति सक्यो।'
**** -विश्वबन्धु कार्की (हाल:भर्जिनिया,संयुक्त राज्यअमेरिका)
अन्त्यसम्म नि फुलिरहन्छ,
तेस्ले कुनै भूल गर्दैन,
मात्र फूल हेर्ने आखाहरु फरक छन,
एउटा फूल फुले पुग्छ
जून अजर अमर फुलिरहन्छ